‘तिमी नै भगवान हौ’ भन्न सिकाउने संसारकै उत्कृष्ठ धर्म हिन्दु सनातन धर्म होः गिरिजी महाराज (भिडि� | KTM Khabar
२०७५ भदौ १२ गते १९:१६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । पृथ्वीका दुई गोलार्ध पूर्व एसिया र पश्चिम यूरोप, अमेरिका मध्ये पूर्वमा अध्यात्मको र पश्चिममा विज्ञानको विकास भएको मान्यता छ । आधुनिक विज्ञानका पछिल्ला निष्कर्षले पुर्वीय आध्यात्मिक अनुभव र ज्ञानका कुराहरुको प्रशंसा गरेको कुरा स्पष्ट भन्न सकिन्छ । विज्ञान बाह्य जगतको ज्ञान हो भने अध्यात्म अन्तर जगतको अनुभब हो । बाहिरबाट हेर्दा पश्चिमा जगत बैभबको शिखरमा रहेझै भए पनि जीवन भित्रबाट भने दुखि पाउछौ । यसै पेरीफेरिमा रहेर महेश संस्कृत गुरुकुल तथा महेश संन्यास आश्रमका अध्यक्ष शङकराचार्य मठ पशुपतिका संरक्षक श्री १००८ स्वामि रमणानन्द गिरिजी महाराजसंग केटिएम खबरका लागि रवि भट्टराईले विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
धर्म, संस्कृतिलाई कसरी ब्याख्या गर्नु हुन्छ ?
धर्म भनेको कुनै पनि बस्तुको मुख्य स्वभाब हो । जस्तै आगोले पोल्छ, सुर्यले आफ्नो प्रकाश दिन्छ, पानी चिसो हुन्छ । त्यसैले मान्छेको पनि आफ्नै स्वभाब हुन्छ । मान्छेका पनि उसका मुल भावहरु हुन्छन र त्यी मुल भावहरुलाई बचाउन सकियो भने मानवता बाच्छ । मान्छेका मुल संम्वेदनात्मक भावहरु छन जस्तै दया गर्नु, दुख देख्न नसक्नु, हिंसा नगर्नु, सत्य बोल्नु, लोभ नगर्नु, क्षमा दिनु यस्ता धर्मका मान्यता र आफ्नो कुल परम्परालाई यथोचित पालना गर्नु नै धर्म हो ।
पुर्वीय ग्रन्थहरु पश्चिमाहरुको तुलनामा कम छन् तर आम–मानिसमा पश्चिमा संस्कृतिको झुकाब बढ्दो छ, कारण के होला ?
खोजाई कता हो । कुन बाटो लाग्ने हो त्यसमा फरक पर्छ । हाम्रो सभ्यताले खोजाईको मुल भनौ प्राप्तिको मुल आफै भित्र छ भन्छौ । म नै मेरा लागि प्राप्त गर्ने लक्ष हो । मैले मेरा लागि प्राप्त गर्ने एक र अन्तिम लक्ष्य भनेको मैले आफैलाई चिन्नु हो । म भन्दा बाहिरका साथि–भाई, ईष्ट–मित्र बन्धुहरु होलान् तर मैले नजानी नहुने भनेको मै भित्र छ र त्यो मै हुँ भनेर हाम्रो अध्यात्मबादको दृष्टि रहन्छ । भौतिकबादीहरुले चिन्नु पर्ने कुराहरु बाहिर छन । खोज्नु पर्ने कुराहरु बाहिर छन । यसलाई जीवन बाच्ने २ दृष्टको रुपमा हेर्न सकिन्छ र यसलाई अलग–अलग गरेर पनि हेर्न सम्भब छैन । त्यस कारण दुई वटा नै कुरालाई समायोजन गरेर हेर्न सकियो भने मात्र पुर्ण मानव भईन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन जरुरी छ ।
अध्यात्मिक शक्ति साधना गर्न सक्यो भने असम्भब कुराहरु संभव हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । यसका लागि धार्मिक ग्रन्थ अध्यन गर्नै पर्ने हो ?
अध्ययन भन्नुको अर्थ अनुशासन पालना गर्नको निमित्त चाहिने ज्ञान हो । अध्ययनले अनुशासनलाई सिकाउछ । जस्तै हामीले नेपालमा असल नागरिक भएर बाच्नको लागि नेपालको कानुनको अध्यन नगरे पनि हुन्छ तर कहिलेकाही संविधानका नियम उप–नियमहरु थाहा नपाउँदा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यस कारण अध्यन गरियो भने सहज हुन्छ । त्यस्तै धर्मका पनि नियमहरु छन, जसलाई शास्त्रकारहरुले नियमहरु बनाउनु भएको छ । त्यी नियमहरुलाई गुरुहरुबाट माता–पिताबाट लिएर आएको छ भने आफु सहि बाटोमा छु भन्न सकिन्छ । त्यस कारण अध्ययन सहायक हो । तर अध्ययन बिना अध्यात्मिक हुन सक्दैन भन्ने चाहि हैन । एक जना कहलिएका सन्त हुनुहुन्थ्यो रामकृष्ण परमहंश उहाँ विबेकानन्द स्वामिका गुरु हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अक्षरसम्म चिन्नु भएको थिएन भन्ने गरिन्छ । त्यस कारण कसैले अध्यात्मिक छौ भनेर हुने र छैनौ भनेर अध्यात्मिक नहुने भन्ने हैन ।
अध्यात्मिक ज्ञानको सहायताबाट असम्भब पनि सम्भव हुन्छ भन्ने गरिन्छ, आम–युवाहरुले पनि यो ज्ञान आर्जन गर्न सक्नु हुन्छ ?
सक्नु हुन्छ । आफ्नो कर्तब्य के हो ? त्यसलाई बुझेर कर्तब्यलाई कर्तब्य कै रुपमा पालन गरेर आफ्नो स्वार्थको कुनै पनि लेपन लगाई आफ्नो कर्तब्य मैले गर्नु पर्छ भन्ने भाव लिएर कर्म गर्नु पर्छ । अध्यात्म कुनै नयाँ अभ्यास हैन । अध्यात्म भनेको जीवन हो । उद्देश्य राम्रो हुनु पर्छ । सबै कर्ममा अध्यात्म जोडिन्छ । तपाई पत्रकारिता गर्दा गर्दै अध्यात्म पत्रकारिता गर्न सक्नु हुन्छ । शिक्षकले पढाउदा पढाउदै अध्यात्मय शिक्षण गर्न सक्छ । जुन ब्यक्ति जुन ठाउँमा जे गरि रहेको पवित्र उद्देश्यले गर्ने कर्मले नै परिवार चल्छ, समाज चल्छ यहि नै त हो अध्यात्म । शान्त समाजको परिकल्पना नै अध्यात्मको सार हो ।
परमात्माको साक्षात्कार हुन्छ भनिन्छ, कसैले कुण्डलिनीको रुपमा, कसैले तेश्रो आखाको रुपमा, यो संभव छ कि छैन ?
परामात्माको साक्षात्कार भनेको आफ्नै बास्तविक स्वरुपलाई चिन्नुु हो । हाम्रा ग्रन्थहरुले यहि भन्ने गर्छन । तपाईले भनेका कुराहरु पनि हुन तर बाटो जस्ता मात्र हुन । हामीले जान्न खोजेको चाही आफ्नो वास्तविक स्वरुपलाई हो “म” । यो अलि बिचित्र छ । यसलाई बुझ्न समय लाग्छ ।
साधनाबाट सम्पुर्ण कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनिन्छ , यो सत्य हो ?
यो लोकप्रिय हो । यहाँ योग सिद्धिका कुरा आउछन् । हुदैन भन्ने चाही हैन, हुन्छ तर यो हुनै पर्छ, गर्नै पर्छ भन्ने चाही हैन ।
यो सिद्धिको विषय युवाहरुमा लोकप्रिय हुन सक्छ, कोही विद्यार्थीहरु परिक्षामा उतिर्ण गर्नको लागि, धन–हिनले धन प्राप्त गर्नको लागि गर्यो भने संभव छ ?
यो हुन्छ । यसका निश्चित साधनाहरु गर्यो भने यो संभव छ । तर यस्ता जीवनका बाहिरी सफलताका लागि गर्नु भन्दा परमात्मामा चिन्तनमा लाग्नु उत्तम हुन्छ । सिद्ध हुँदा सिद्धिको बहकाउमा मान्छे अहंकारी बन्न सक्छ । सिद्ध त केही बर्षको साधनाले योगहरुबाट हुन सक्छ तर आत्म चिन्तन ठुलो कुरा हो । त्यसैले म लाई चिन्न तर्फ लाग्नु पर्छ ।
अहिले त तपाईले भनेका साधना र शक्ति कै विश्वास हुने आधार छैनन् नी ?
यो संभव छ । तर यता तिर लाग्नु भन्दा म लाई चिन्न तर्फ लाग्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो । बिश्वास जगाउनको निमित्त सबै आफै गर्छु भन्दा पनि गुरुहरुको विश्वास गर्नु पर्छ ।
अहिलेका युवाहरुलाई पुर्वीय सभ्यता तिर झुकाब दिलाउनको तिमित्त के गर्न सकिएला ?
अहिलेको युवाहरुलाई बाहिरी आबरणले छोपेको भौतिक कुराको पछाडि दौडिएको छ । त्यस कारण आजकल युवाहरु भड्किला छन् । तर मान्छे भनेको स्वतन्त्रताको प्रिय हुन्छ । मान्छे स्वतन्त्र छ र नै मान्छे छ । त्यसैले जो कसैलाई अध्यारो खाल्डोमा पस्ने मन छ भने जबरजस्ति गरेर हुदैन एक पटक पसेर अध्यारो देख्यो भने उ स्वयं निस्किएर आउछ । अहिले पश्चिम स्वयं नै भौतिकताको खोजि गर्दा गर्दै अघाएर अध्यात्मतिर लाग्दैछ । त्यस कारण हस्तक्षपकारी भुमिका हुन हुदैन । केवल ज्ञान दिने हो । कसले के गर्यो अथवा गरेन भनेर हस्तक्षप गर्नु हुदैन । हस्तक्षप गरेर अध्यात्मिक बनाउनु हुदैन । प्रचारवाजि गरेर हुदैन ।
महेश संस्कृत गुरुकुल चलाउनु भएको छ, यो गुरुकुल कसरी चल्दै छ ?
यो गुरुकुल परमपुज्य १००८ ब्रमलिन डा. रमानन्द गिरी माहाराजले देब घाटमा स्थापना गर्नु भएको हो । युवाहरुलाई अध्यात्मय बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले खोलिएको गुरुकुल हो । म त्यहि गुुरुकुलको विद्यार्थी हुँ र अहिले २५ औँ बर्षमा चलिरहेको छ । कक्षा ६ देखि आचार्य स्नाकोत्तरसम्म निःशुल्क आवासिय सुविधा सहित औपचारिक शिक्षा प्रदान गर्छ ।
अत्यमा के भन्नु हुन्छ ?
तिमि नै ज्ञानी हौ । तिमि नै सर्व–स्वरुप हौ । तिमि नै अन्तिम अस्तित्व हौ । संसारमा तिमि नै भगवान हौ भन्न सिकाउने संसारकै उत्कृष्ठ धर्म हिन्दु सनातन धर्म हो । धर्म भनेको जीवनको अलग चिज हैन । त्यस कारण यसको पालना गर्नु हाम्रो कर्तब्य हो ।
समय र सम्वादको लागि धन्यबाद ।
यहाँहरुलाई पनि धन्यबाद ।
श्री १००८ स्वामि रमणानन्द गिरिजी महाराजसंगको भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको लिंकमा जानुहोस्ः